प्रधानमन्त्रीज्यू, टेलिप्रिजेन्सबाट देश चल्न सक्दैन - Himalaya Post
प्रधानमन्त्रीज्यू, टेलिप्रिजेन्सबाट देश चल्न सक्दैन
Posted by Himalaya Post | १८ भाद्र २०७६, बुधबार १६:०२ |
प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले उपचारका लागि सिंगापुरमा हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । हामीले अथक प्रयास गरेर संसदबाट केही समय अघि एउटा कानुन पारित गर्‍यौँ, कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराउनु पर्यो भने उसको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुनेछैन । यो कानुनको पालना गर्नुभएकोमा प्रधानमन्त्रीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
नागरिकको यस विषयका अन्य चासोहरुलाई प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा बताउने कुरामा म विश्वस्त छु । प्रधानमन्त्रीको उपचारको बारेमा यर्थाथ जानकारी सरकारले संसदलाई गराएको छैन । जनताले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको बारेमा जान्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सकलाई उद्धृत गरेर छापाहरुमा आएको सीमित सूचनाको आधारमा यो अनुमान लगाउन सकिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सुधारन्मुख छ । हामी चाहन्छौँ पूर्ण सुधार होस् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनु भएका प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति, क्रियाशीलता, योग्यता, संसारका लागि नमूना बनोस् । तर केही चिकित्सकहरुले संकेत गर्नुभएजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको जस्तो उपचार अर्थात् पटकपटक विदेशमा गएर केही समय विश्राम गरेर उपचार गनुपर्ने भयो भने चाही के गर्ने ? संविधानको धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा नीहित छ र मन्त्रीपरिषद्को प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । संसदीय पद्धतीमा संसदको कामको सिर्जना पनि प्रधानमन्त्रीबाटै हुन्छ । प्रधानमन्त्री ‘सेरिमानियल पोजिसन’ होइन । ‘डे टु टे’ जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र बढाइएको छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यी सबै कुराको इच्छाशक्ति राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर, इच्छाशक्ति मात्रै सबै कुरा होइन । शारीरिक स्वास्थ्यले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सावैभौम सत्ताको रक्षामा अग्रजिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । कार्यकारी प्रमुख एकैपटक लामो समय समयसम्म देश बाहिर बस्दा एकातिर राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीतिक मर्यादा आदिमा जोखिमको प्रश्न त छँदैछ । प्रत्येक दुई तीन महिनामा १०-१२ दिन विदेश गएर टेलिप्रिजेन्समार्फतबाट मन्त्रीहरुको ब्रिफिङ लिएर देश चलाउने कुराबाट शासकीय जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भएको भए फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर कष्ट दिएर भए पनि प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको अपेक्षा राख्ने कुरा स्वभाविक हुन्थ्यो । तर यस्तो अवस्था छैन । यहाँ नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीको बहुमत छ । सजिल्यै संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न सक्छ । एसेएक प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्तिहरु यो पार्टीमा हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्ने व्यक्तिहरु यो ठाउँमा हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा हामी उहाँलाई विश्राम दिन किन चाहिरहेका छैनौँ ? मैँले धेरै पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बा भनेर सम्बोधन गरेको सुनेको छु । उहाँ हाम्रो पनि बा सरह हुनुहुन्छ । हामी हाम्रो बा बिरामी हुनुभएको भए के भन्थ्यौँ ? बा ! धपेडी नगर्नुहोस्, बा ! आराम गर्नुहोस् । बा ! विश्राम लिनुहोस् । हामी हाम्रो बालाई त्यसो भन्छौँ । तर हामी प्रधानमन्त्री ‘बा’लाई यसो भन्न किन सक्दैनौँ ?
यो म कसैलाई मात्रै भनिरहेको छैन । यो गल्ती हिजो हामीले पनि गर्‍यौँ । यो अन्याय हिजो हामीले पनि गर्‍यौँ र सबैभन्दा बढी नजिक बस्ने मान्छेले अन्याय गर्‍यो । यो अन्याय तपाईहरु नगर्नुहोस् । यो गल्ती तपाईंहरु नदोहोर्‍याउनुहोस् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम गर्न दिनुहोस् । किनकी नेपालको आन्दोलनमा त्यत्रो ठूलो योगदान पुर्‍याउनु भएको, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यत्रो ठूलो योगदान पुर्‍याउनु भएको, यत्रो ठूलो राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको । यतिमात्र होइन, स्वाभिमानको लडाईंमा एउटा अथक योद्धाको रुपमा काम गर्नुभएको प्रधानमन्त्री हामी लामो समयसम्म हाम्रो बीचमा अभिभावकको रुपमा देख्न चाहन्छौँ ।
तर, यो कुरा त्यतिखेर मात्रै सम्भव छ, शरीर सबैको शरीर हो । मन पनि सबैको मन हो । प्रधानमन्त्रीको मनको इच्छाशक्तिको म प्रसंशा गर्छु । म फेरि पनि कामना गर्छु, त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले यस रोष्ट्रममा उभिएर हामीलाई बताइदिने अवस्था बनोस्, हामी सबै प्राथना गर्छौँ, कामना गर्छौँ कि म लगातार विश्राम नलिइ काम गर्ने अवस्थामा छु । म आवश्यकता पर्दै गर्दा २४/७ भएर काम गर्न सक्छु भनेर भन्नुहोस् भन्ने प्राथना गर्छु ।
तर, यस्तो अवस्था आउँदैन भने म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कुरा सुन्दै गर्दा कतिपयलाई रिस उठ्ला । तर, यो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन । यो देशको कुरा पनि हो । देशभन्दा पहिला यो मानवियताको कुरा पनि हो । हामी प्रधानमन्त्री एउटा मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नबिर्सौँ ।
(नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राखेको धारणामा आधारित)
Previousसम्बन्धित बैंकको एटीएम मात्र प्रयोग गर्न नेप्सको आग्रह
Nextदुधौलीमा हाजिर गर्न जाँदा जाँदै एसएसपी भण्डारीले पाए जनताको वाहावाही
सूचना महामार्गमा जोडिए नेपाल र चीन, भारतीय एकाधिकारको अन्त्य
२८ पुष २०७४, शुक्रबार १८:५९
दूरदराजसम्म मेडिकल कलेज पुर्याउने कि डा. केसीको अवरोधमा घुँडा टेक्ने ? निर्णायक बैठक बुधबार !
भ्रमण वर्ष : ‘पर्यटकको गन्तव्य कर्णाली’
१४ पुष २०७६, सोमबार १६:५३